ကောင်းကင်ယံထက်ဝဲပျံရင်း ဂျင်နိုဆိုဒ်ကိုတိုက်ဖျက်သူ အပိုင်း 1-10
by rightsforburma | Nov 16, 2018 | ARTICLES
ကောငှးကငယှံထကဝှဲပှံရငှး ဂငှနွိုဆိုဒကွိုတိုကဖွကှသှူ အပိုငှး – ၁
၁၉၇၀ ပှည့နှှဈ ဗီယကနွမှ စဈမှပှငတွေနရော __
ခှလငှတွေပခွှဲ တခုကို ဦးဆောငတွဲ့ အမရေိကနစွဈဗိုလှ တယောကဟှာ ဗီယကကှောငှးတှလကွခကှေနွဲ့ သှေးသံရဲရဲဖှဈနပေါတယှ ။
သူ့ကိုယမွှာတော့ ဗီယကကှောငှးတှပဈထေဲ့လိုကတွဲ့ အကေေ – ၄၇ ကညှဆွံ ၄ ခုက ဖောကဝှငနှတောပါ ။
ဒါပမေဲ့ စဈဗိုလဟှာ နောကဆွုတဖွို့မစဉှးစားပဲ သူ့တပခွှဲနဲ့ ရှေ့တကပွီး ရနသှူကို ခှမှေုနှးဖို့သာ အမိန့ဆှကပှေးပါတယှ ။
သူ့ရဲ့မိုကမွိုကကွနှးကနှး အမိန့နှဲ့ တပခွှဲဟာရှေ့တိုးပီး ရနသှူကို တနပှှနတွိုကစွဈဆငှ ခှမှေုနှးပီးခိနမွှ အဲ့ဒီစဈဗိုလဟှာ စဈမှပှငရှေှေ့တနှးဆေးရုံကို တကသှှားပါတယှ ။
ညာဘကှ ပုခုံး လကှ တငပွါး နဲ့ ခှထေောကှ ၄ နရောမှာ ဒဏရှာရထားပမေဲ့ chain of command ကို မပကှစှပေဲ ဆကလွကတွိုကပွှဲဝငပွီးရနသှူကို ခှမှေုနှးနိုငတွဲ့ အဲ့ဒီစဈဗိုလဟှာ ငှကှယွတေံဆိပှ ခှီးမှှင့ခှံရပါတယှ ။
အဲ့ဒီ စဈဗိုလနွာမညကွတော့ ” ဝကဈွလေ ကလခှ ” ပါ ။
ရာထူးအဆင့ဆှင့ှ တိုးလို့ ကှယလှေးပှင့ရှ ဗိုလခွှုပဖှှဈတဲ့အခနွိမှာ ဥရောပက NATO တပရှဲ့ အကှီးအကဲ ဖှဈလာသူပါ ။
ကိုဆိုဗိုဗုံးကှဲစဈဆငရှေးကို ဦးဆောငခွဲ့ရသူ ” ဗိုလခွှုပကွလခှ ” လို့ နာမညှ ကှီးလာသူ တယောကပွါ ။
ထိခိုကဒွဏရှာရနပမေေဲ့ နောကမွဆုတတွမှး ဆကလွကတွိုကပွှဲဝငတွတတွဲ့ ဗီယကနွမတွုနှးကတညှးက သူ့ရဲ့ခေါငှးမာစိတကွို ကိုဆိုဗိုမှာ လညှး လာတှေ့ရပှနပွါတယှ ။
အဲ့ဒီ ခေါငှးမာမှုနဲ့ပဲ လူမိုးကှီးဝါဒီ မီလိုဆီဗဈကို ဦးခိုးပဈခဲ့သူပါ ။
ဘော့ဈနီးယားပှညတွှငှးစဈနဲ့ ဂငှနွိုဆိုဒကွို အဆုံးသတပှေးတဲ့ ဒတနွစောခှုပှ ခှုပဆွိုပှဲမှာ ဆားဘီးယားသမမွတ မီလိုဆီဗဈ ဟာ အရေးပါအရာရောကတွဲ့ သံတမနတွယောကအှဖှဈ အသုံးတခွောံပါတယှ ။
လူကှီးလူကောငှးပီသသော နိုငငှံရေးသမားတယောကဟှနနွဲ့ ဒတနအှစေညှးအဝေးကို တကလွာတဲ့မီလိုဆီဗဈကို ဂငှနွိုဆိုဒရှာဇဝတကှောငအှဖှဈ ယူဆဖို့ သံတမနအှတွမောှားမှားက လကတွှန့နှခေိနမွှာ ဗိုလခွှုပကွလခကွ ” ဒီကောငမွီလိုဆီဗဈဟာ သားသတသှမားလိုစိတနွဲ့ ကောငဗွှ ” လို့ ဒဲ့ဒိုးပှောခဲ့သူပါ ။
ဒတနဆှှေေးနှေးပှဲမတိုငခွငှ ဘော့ဈနီးယားမှာရှိတဲ့ ဆာဘစွဈတပကွို NATO က ၃ ပတလှောကဗွုံးကှဲခဲ့ရပါတယှ ။
ဗိုလခွှုပကွလခကွတော့ ဗုံးကှဲစဈဆငရှေးပီးခါစ ဆာဘတွပတှှအှခယေေိုငနှတေုနှး ကာရာဒဈဇှ တို့ ရတခွိုမလာဒဈတို့လို ဆာဘရှာဇဝတကှောငတှှကေို ဝငဖွမှးပဈဖို့ ဆောသှှသူပါ ။
ဒါပမေဲ့ နိုငငှံရေးသမားတှကေ အပဈအခတရှပဆွဲရေးပကှသှှားမှာကှောကလွို့ မဖမှးပဲ လှှတထွားပေးမိလိုကပွါတယှ ။
ဗိုလခွှုပကွလခကွိုလညှး ” ကှိုးပေးမဲ့ တရားခှငမွှာ ကှိုးအကှောငှးမှပောသေးတာ ကောငှးတယှ ” လို့ နှဈသိမ့ထှားလိုကပွါတယှ ။
ဘော့ဈနီးယနှး ၂ သိနှးလောကကွိုသတဖှှတှ ဂငှနွိုဆိုဒလွုပပွီး တစုံတရာအရေးယူခံရခှငှးမရှိတဲ့အခါမှာတော့ မီလိုဆီဗဈဟာ လကရှဲဇကရှဲ နဲ့ ကိုဆိုဗိုဂငှနွိုဆိုဒကွို မီးအရှိနမှှှင့ပှါတော့တယှ ။
ဒါပမေဲ့ ဒီတခါမှာတော့ အခိနသှိပမွဆှဲလိုတဲ့ US အပါအဝငှ အနောကနွိုငငှံတှဟော ဆာဘတှှအပေေါှ ဗုံးကှဲစဈဆငရှေးစဖို့ အမှနပှှငဆွငပွါတယှ ။
၁၉၉၉ မတလွမှာ ဥရောပတဝှမှးက NATO တပတှှကေို တပလွှန့ထှားပီး လယောဉတှှကေိုလညှး ဗုံးတှဒေုံးတှတပွဆငေကွာ ပှေးလမှးပေါအှသင့တှငထွားလိုကပွီး activation order ထုတဆွင့ထှားလိုကပွါတယှ ။
ဒီအခိနမွှာ ဥရောပက NATO တပပှေါငှးစုရဲ့ အကှီးအကဲအဖှဈ တာဝနယှူထားရသူကတော့ ဗိုလခွှုပကွလခှ ပါပဲ ။
ရနဘွူယေးဆှေးနှေးပှဲမှာ ဗိုလခွှုပကွလခကွ ဆာဘကွိုယစွားလှယကွို ” Activation Order ထုတထွားပီးပီ ; အမနွိ့ရှတာနဲ့ တပှိုငနွကှ ခငဗွှားတို့ကိုကှုပကွတော့ ပဈမှာပဲ ” လို့ ဒဲ့ဖှဲခဲ့ပါသတဲ့ ။
ကဲ ! ဆာဘတှှေ ဘယလွို ရငဆွိုငမွလဲ ?
ကောငှးကငယှံထကဝှဲပှံရငှး ဂငှနွိုဆိုဒကွိုတိုကဖွကှသှူ အပိုငှး – ၂
အရနအှငအှားအပါအဝငှ ရှိသမှှ လကနွကကွိုငတှှစေုပေါငှးလိုကမွယဆွိုရငှ စဈသား ၁.၂ သနှးရှိတဲ့ ဆာဘတှှကလညှေး အလှှော့မပေးပါဘူး ။
US အထူးသံတမနှ ဟိုးလဘွရုခကွ ဆှေးနှေးပှဲတှကေို ရပဆွိုငှးလိုကပွီလို့ မကှငှောမီ နာရီအနညှးငယကွတညှးက ဆားဘီးယားအစိုးရဟာ နိုငငှံတောအှရေးပေါအှှခအနေေ ကှှငောလိုကပွါတယှ ။
ဒါက ၁၉၉၉ မတလွ ၂၃ ရကနှေ့မှာပါ ။
NATO ရဲ့ ဗုံးကှဲစဈဆငရှေးကို တုန့ပှှနနွိုငဖွို့ ဆာဘလှကှေောငှးကာကှယရှေးအငအှားကိုလညှး အသင့ပှှငထွားလိုကပွါတယှ ။
Surface to Air Missiles = SAM = မှပှငမွှေဝဟငေပွဈဒုံးပှံတပဖွှဲ့တှကေို တပလွှန့ထှားပါတယှ ။
SAM –2တပရှငှး ၃ ရငှး ;
SAM –3တပရှငှး ၁၆ ရငှး ;
SAM –9တပရှငှးကှီး ၆ ရငှး
စုစုပေါငှးလကှေောငှးကာတပရှငှး ၂၅ ခုဟာ ဟာ NATO ဗုံးကှဲလယောဉတှှကေို ရငဆွိုငဖွို့ အသင့ဖှှဈနပေါပီ ။ ရှှေ့ပှောငှးနိုငတွဲ့စဈပဈစညှးတှကေို ကညှကွှယရှာနရောတှမှော သိမှးဆညှးပဈပါတယှ ။ မရှေှ့ပှောငှးနိုငတွဲ့ပဈစညှးတှကေို ဖုံးကှယပွီးမကှကွှယရှအောငလွုပကှှပါတယှ ။ NATO သုံးတဲ့ သတတွု + အပူအာရုံခံစနဈတှကေို လှည့စှားဖို့ ပဈမှတတွုတှဖနွတေီးပီး ဓါတုဆေးပဈစညှးတှနေဲ့သုတလွိမှးတာအထိ ကယှကွယှပှှန့ပှှန့ှ လုပကှှပါတယှ ။
လကနွကအှငအှားအနနေဲ့ ပှနတွှကကှှည့ရှငှ ယာဉတွငှ
SAM –9အစငှး ၁၀၀ အပါအဝငှ သာမနလှယောဉပွဈလကနွကှ ၁၈၀၀ ကှောအှထိပိုငဆွိုငထွားပီး အငတွာနကခွိတဆွကရှဒေါတှကေိုပါ ဖှန့ကှကှခွထှားတဲ့ ဆာဘလှကှေောငှးကာကှယရှေးဟာ အတောတှောင့တှငှးတယလွို့ပှောရမှာပါ ။
အမရေိကနဗွိုလခွှုပှ Ryan ကတော့ စဈပှဲမစခငကွှနဂွရကလွှှတတှောကှှားနာပှဲမှာ ဆာဘလှကှေောငှးကာကှယရှေးအငအှား အတောကှောငှးမှနတွယလွို့ ဝနခွံသှားပါတယှ ။
ပငတွဂှနကွ ဗိုလခွှုပတှှကတေော့ ဆာဘလှကှေောငှးကာစနဈကို ဖှိုဖို့ NATO အနနေဲ့ လယောဉှ ၁၀ စငှးလောကတှော့ ရငှးရလိမ့မှယှ လို့ ခန့မှှနှးကှပါသတဲ့ ။
ဗိုလခွှုပကွလခကွို ပေးထားတဲ့အမိန့မှှာတော့ NATO ဘကကွ အထိအခိုကအှကအှဆုံးမရှိစရေ တဲ့ဗှာ ။
ဘယလှောကပွဲ လှှို့ဝှကှ လှှို့ဝှကှ
ဆာဘတှှဘကွကေ လကှေောငှးကာကှယရှေးတပကွို အသင့ပှှငတွာအပှငှ နောကထွပတွပဖွှဲ့တှကေိုလညှး နရောခထှားနပေါတယှ ။
ပှငသှဈနိုငငှံ ရနဘွူယေးမှာ ဆာဘကွိုယစွားလှယကွ အခိနဆွှဲဆှေးနှေးနစဉအှတှေငှး ဆာဘဗွိုလခွှုပှ Pavkovic ဦးဆောငတွဲ့ အမှတှ ၃ ဆာဘတွပမွတောဟှာ ကိုဆိုဗို နယစွပမွှာ လှှို့ဝှကတွပခွပှီး အသင့စှောင့နှတောပါ ။
သူနဲ့အတူ စဈသား ၁၁၄ ၀၀၀ ; ရဲ့နဲ့ပှညသှူ့စဈ ၃ သောငှးခှဲအပါအဝငှ တင့ကှား + သံခပှကွာ အစငှး ၄၀၀ ရှိနပေါတယှ ။
ဆာဘတှှအနနေေဲ့ ဘယလှောကပွဲ လှှို့ဝှကပွီး လုပလွုပှ CIA ကတော့ ဒီတပတှှေ စုရုံးနတောကို ထောကလွှမှးမိပါတယှ ။ ဒါ့အပှငှ ဒီ အမှတှ ၃ ဆာဘတွပမွတောရှဲ့ တပဖှှန့ပှုံဟာ NATO ကိုရငဆွိုငဖွို့ ; သမရိုးကှ စဈပှဲတခုကို ဆငနွှှဲဖို့ထကှ အစုလိုကအှပှုံလိုကလွူသတပွှဲတှကေိုနှှဲဖို့ ပှငဆွငနှတေဲ့ အကှောငှး CIA ညှှနမွှူးGeorge Tenet က ဗိုလခွှုပကွလခကွို ပှောပှထားပါတယှ ။
အမှတှ ၃ ဆာဘတွပမွတောရှဲ့ ရညရှှယခွကှ ဘာလဲဆိုတာ သိပကှှာကှာဆနှးစဈစရာမလိုပါဘူး ။
ဆားဘီးယား ဒု – ဝနကှှီးခှုပှ Vojislav က လူထုရှေ့မှာ
” NATO က ဆားဘီးယားကို ဗုံးကှဲလို့ကတော့ ကိုဆိုဗိုက အလဘှေးနီးယနှးတှေ တယောကမွှ မကနှအှောငှ ဖှဈသှားစရမယှေ ” လို့ကွှမှိးဝါးနတောပါ ။
အမှတှ ၃ ဆာဘတွပမွတောရှဲ့ တပမွှူးPavkovic ကတော့ အလဘှေးနီးယနှး တယောကမွကနှအှောငှ သတပွဈမယလွို့ခှိမှးခှောကပွါသတဲ့ ။
ဆားဘီးယားသမမွတ မီလိုဆီဗဈ ကလညှး အလဘှေးနီးယနှးတှကေို မောငှးထုတခွငှရှငှ ၅ ရကတွညှးနဲ့ ပှဲပှတတွယှ လို့ ဗိုလခွှုပကွလခှ ကို ကလိ ပါသေးတယှ ။
ကဲ ! ဗိုလခွှုပကွလခှ နဲ့ ဆာဘတှှေ ဘယသှူပိုခေါငှးမာသလဲ ကှည့ရှသေးတာပေါ့ ။
video ကို BBC – Documentary ” The Fall of Milosevic ” မှ ဖှတယှူပါသညှ ။
video ပါ အကှောငှးအရာ >> ကိုဆိုဗိုက အလဘှေးနီးယနှးတှကေို တယောကမွှ မကနှအှောငလွုပပွဈမယလွို့ ဆာဘှ ဒု – ဝနခွှုပှ Vojislav ကဆာဘလွူထုကို မှှောကပွင့ပှေးနစဉှေ ။
( စဈပှဲလညှးပီးရော Vojislav ဟာ သူကိုယတွိုငှ ခုံရုံးမှာသှားအဖမှးခံပီး ဖောကှောငလွုပခွဲ့တယှ ။ )
ကောငှးကငယှံထကဝှဲပှံရငှး ဂငှနွိုဆိုဒကွိုတိုကဖွကှသှူ အပိုငှး – ၃
စဈဆငရှေးရဲ့ နာမညကွ Operation Allied Force ။
NATO ဟာ ၁၉၉၉ မတလွမှာ ဗုံးစကှဲဖို့အတှကှ စဈဆငရှေးစီမံခကှကွို ၁၉၉၈ နှဈဦးပိုငှးကတညှးက ရေးဆှဲနတောပါ ။ ကိုဆိုဗိုဒသကေိုသာမက ဆားဘီးယားပှညမွကှီးရဲ့ ၄၄ မဉှးပှိုငတှောငပွိုငှးနယနွိမိတတှှကေိုပါ ဗုံးကှဲစဈဆငရှေးနယမှှအဖှဈေသတမွှတထွားပါတယှ ။
– ကိုဆိုဗိုဒသကေ ဆာဘလွကနွကကွိုငမွှားခှှငှးခကှမွရှိထှကခွှာရနှ
– အမောငှးထုတခွံအလဘှေးနီးယနှးဒုကခွသညမွှား အား ကိုဆိုဗိုဒသရှေိ ၎င်းငျးငြးငွးငှးတို့၏နအေိမမွှားသို့ပှနလွညဝှငရှောကနှထေိုငခွှင့ရှရနှ
– ကိုဆိုဗိုဒသကေို မူလအတိုငှး ဆားဘီးယားအခှုပအှခှာအာဏာပိုငနွကအှတှငှး အလဘှေးနီးယနှးကိုယပွိုငအှုပခွှုပခွှင့ရှဒသအဖှေဈ ပှနလွညသှတမွှတရှနှ
– ယငှးအှခအနမှေေားခိုငမွာစရနှေ NATO တပမွှား ကိုဆိုဗိုဒသေ သို့ ဝငရှောကတွပစွှဲရနှ
၁ – အရပဘွကကွို မထိခိုကစှပေဲ ဗဟာဗှူ ဟာပဈမှတမွှားကို ထိရောကစွှာဖကှဆွီးနိုငစွှမှး
၂ – ရာဇဝတကှောငမွီလိုဆီဗဈ နှင့ှ သာမနဆွာဘလွူထုကို ခှဲခှားနိုငစွှမှး
၃ – NATO ၏ အပှတအှသတသှာလှနသှော လကှေောငှးစှမှးအား
၄ – ဆာဘနွိုငငှံ၏ ဗဟိုဟနခွကှကွို ယိုးယှငှးစနေိုငသှညမွှစ၍ အလုံးစုံဖကှဆွီးနိုငသှညအှထိ အဆင့ဆှင့ှ တိုကခွိုကနွိုငစွှမှး
စတာတှကေို အှခခေံထားပါတယှ ။
NATO ဟာ ဒီစဈဆငရှေးကို လကှေောငှးအငအှားသပသှပနွဲ့ အနိုငယှူမယှ ; မိမိဘကကွ အထိအခိုကအှကှ အဆုံးမရှိစရေ လို့ မူဝါဒခမှှတထွားပါတယှ ။
ဒီမူဝါဒအရ NATO လယောဉတှှဟော ဆာဘလှယောဉပွဈလကနွကတှှေ လကလွှမှးမမှီရာ အမှင့ပှေ ၁၅ ၀၀၀ အထကကွနေ ပှံသနှးတိုကခွိုကရှမှာဖှဈပါတယှ ။
( ဆာဘလှကှေောငှးကာတပဖွှဲ့က အမှင့ပှေ ၁ သောငှးအထိကို သတကွှငှး = killing zone အဖှဈသတမွှတထွားတာကိုး ။ )
အငအှားခငှး နှိုငှးယှဉကှှည့ရှငှ NATO ဟာ ဆာဘစွဈတပထွကှ ၃၅ ဆ ပိုအငအှားကှီးတာမို့ တှကခွကှထွားတဲ့အတိုငှး ကှကတွိဝငလွာလိမ့မှယှ ; စဈဆငရှေးဟာလညှး ၃ ရကှ ပဲကှာမယှ ။ အလှနဆွုံးကှာရငှ တပတပွဲလို့ တှကခွကှကှှပါတယှ ။
NATO ဘကကွ အလှယတွှကသှလို ဆာဘတှှဘကွကလေညှး ခပပှေါ့ပေါ့ တှကထွားတာ ရှိပါတယှ ။ ဆာဘတှှထငွတောက ဗုံးကှဲစဈဆငရှေးဟာ ၂၄ နာရီပဲကှာမယှ လို့ တှကထွားတာပါ ။
ဆာဘတှှေ ခေါငှးမာပှရငှ NATO ဘကကွလကလှှော့သှားလိမ့မှယှ လို့ တှကထွားပါသတဲ့ ။
၁၉၉၉ မတလွ ၂၄ ရကနှေ့ည ဗုံးကှဲစဈဆငရှေး စစခငှး အမရေိကနှ သမမွတကလငတွနကွ ကှှငောခကှ ထုတပှှနပွါတယှ
၁ – ဒီကိဈစကို ကိုငတွှယရှာမှာ NATO ရဲ့အလေးထားမှုကို ဖထွောုတရှနှ
၂ – မီလိုဆီဗဈရဲ့ ရကစွကကှှမှးကှုတမွှုမှားကို တားဆီးရနှ
၃ – ( ခေါငှးမာတယဆွိုရငှ ) ဆာဘတွပမွတောရှဲ့ စဈရေးစှမှးရညကွို လုံးဝဥသုံ ရိုကခွိုးဖကှဆွီးပဈရနှ
ကလငတွနရှဲ့ စကားလုံးတှနေဲ့ အတူပှံတကလွာတာကတော့ တိုးမဟော့ခှ ၁၀၉ လုံးပါ ။
အဒရေီယားတဈ ပငလွယပှှငထွဲက စဈသငှဘွောတှနေဲ့ ရငေုပသှငှဘွောတှဆေီကနေ ပဈလှှတလွိုကတွဲ့ တိုးမဟော့ခတှှဟော ကိုဆိုဗိုမှို့တကွော လှှပစွဈစကရှုံကို ကှကတွိဝငမွှနပွီး တမှို့လုံး အမှောငအှတိကှ သှားပါတယှ ။
ကိုဆိုဗိုက ဆာဘရှဒေါတှေ အလုပလွုပမွရတော့အောငဖှှဈသှားပါတယှ ။
ဒါ့အပှငှ အရေးကှီးတဲ့ လဆေိပတှှေ နဲ့ ဆာဘလှတပအှှခေစေိုကှ စခနှးတှကေိုလညှး တပှိုငနွကဝှငမွှနပွါတယှ ။
တိုးမဟော့ခတှှအပေီးမှာတော့ NATO လဟောဉတှှေ ပှံတကလွာခဲ့ပီး ဆာဘလှကှေောငှးကာစခနှးတှနေဲ့ ရဒေါတှကေို ပဈပါတယှ ။
ဆားဘီးယားနိုငငှံရဲ့ နယစွပမွဉှးအပှငဘွကကွနေ ပတပွှံတဲ့ B – 52 လယောဉတှှကေ အခိုငမွာဆုံးဆာဘလှကှေောငှးကာစခနှးတှကေို ပဈပါတယှ ။
မတလွ ၂၄ ရကှ ပထမည ပဈခတမွှုမှာ ပဈမှတပှေါငှး ၄၀ ကို တပှိုငနွကပွဈတာပါ ။
ပထမ တည တညှးတငှ အကှိမပှေါငှး ၄၀၀ ပှံသနှးတိုကခွိုကခွဲ့ပီး ဆာဘလှတပွစခေနှး ၅ ခု ပှောငတွလငှးခါသှားပါတယှ ။
ကနှတွဲ့ ရဒေါစခနှး ; ဆကသှှယရှေးစခနှး ; ခဲယမှးသိုလှောငရှုံတှေ နဲ့ ဆာဘတွပစွခနှးတှကေိုလှှပစွဈဓါတအှားဖှန့ခှှဲပေးတဲ့ ဓါတအှားပေးစကတှှလညှေး ပှားပှားဝပကွုနပွါတယှ ။
ဆားဘီယား နဲ့ ကိုဆိုဗိုမှာ ရှိတဲ့ ဆာဘတွပစွခနှးတှေ နဲ့ အမိန့ပှေးဌာနခှုပတှှကေိုလညှး ပဈခှငှးပါတယှ ။
ဆားဘီးယားနိုငငှံတှငှးသာမက အိမနွီးခငှးမှနတွီနီဂရိုးမှာရှိတဲ့ Podgorica က ရဒေါကိုလညှး ပဈခှငှးလိုကပွါတယှ ။
မှနတွီနီဂရိုးဟာ အဲ့ဒီအခိနတွုနှးက ဆားဘီးယားနဲ့ပူးတှဲပီး ယူဂိုဆလားဘီးယားအဖှဈ ဆကလွကရှပတွညနှတေုနှးပဲကိုး ။
ဒီ ပထမ ညမှာ ပဈတဲ့ပဈမှတတှှကေို ကှည့ရှငှ ရှေ့တနှးမှာ ရှိတဲ့ ဆာဘတွပတှှထကှေ နောကပွိုငှးမှာရှိတဲ့ မဟာဗှူ ဟာမှောကပွဈမှတတှှကေိုပဲ ဦးခိုးပဈခတှ တဲ့သဘောပါ ။
NATO အနနေဲ့ သာမနှ ဆာဘခှှလငှစွေဈသားတှကေိုတောငှ မလိုအပရှငှ မခှမှေုနှးဖို့ ရညရှှယထွားပါတယှ ။
နောကတွနှး ကညှလွှတမှှမှော အေးဆေးသကသှာ အခန့သှားထိုငပွီး အမိန့ပှေးနတေဲ့ ဆာဘဗွိုလခွှုပတှှကေိုပဲ ပဈမှတထွားခှမှေုနှးတဲ့သဘောပါ ။
ကောငှးကငယှံထကဝှဲပှံရငှး ဂငှနွိုဆိုဒကွိုတိုကဖွကှသှူ အပိုငှး – ၄
ဒီ ပထမ ည ဗုံးကှဲစဈဆငရှေးကို အိမဖှှူ တကွောနေ အခိနနွဲ့ တှပေးညီ ကှည့ရှှု့နသေူတှကတေော့ အမရေိကနသှမမွတကလငတွနှ ; ကာကှယရှေးဝနကှှီး ကိုဟငနွှ နဲ့ ကှယှ၅ပှင့ှ ဗိုလခွှုပကှှီး ရှယလွတွနှ တို့ပါပဲ ။
တိုကခွိုကမွှု မစတငခွငမွှာ တခို့ပဈမှတတှှဟော ဆာဘအှရပသှားနထေိုငရှာတှေ နဲ့ နီးလှနှးလို့ သူတို့ကပယဖွကှပွဈကှပါသေးသတဲ့ ။
အဲ့ဒါအပှငှ ထုံးစံအတိုငှးသုံးနကှေ ပေါငှ ၂၀၀၀ ပှငှးအားဗုံးတှကေို မသုံးစပေဲ ပေါငှ ၅၀၀ ပှငှးအားရှိတဲ့ ဗုံးတှကေိုပဲ သုံးဖို့ ညှှနကှှားထားပါသတဲ့ ။
NATO အနနေဲ့ ပဈမှတတွခုခငှးကို ၁၀၀ % နီးပါးကှကတွိပဈခတနွိုငမွှတော့ ပေါကကွှဲအားကို လှှော့ခပှဈတဲ့ သဘောပါ ။
ဘေးထှကပွကှစွီးမှုကို နညှးနိုငသှမှှ နညှးပီး အရပသှားတှမထေိခိုကအှောငှ ကှံဆောငကှှတာပါ ။
ဆာဘလှကှေောငှးကာကှယရှေးပါရဂူတှဟော စဈပှဲမစတငခွငကွတညှးက ၁၉၉၁ ပငလွယကှှေ့စဈပှဲမှာ အမရေိကနကွို ရငဆွိုငခွဲ့တဲ့ ဆကဒွမရှဲ့လကှေောငှးကာတပမွှူ းတှဆေီသှားပီး အကှံဉာဏတှောငှးထားကှပါသတဲ့ ။
ဆကဒွမ့တှပမွှူ းတှပေေးတဲ့ အကှံကတော့ ” တို့တှရေဲ့ လကှေောငှးကာစနဈဟာ အမရေိကနလှတပွကေိုဖှိုခဖှို့ မစှမှးနိုငပွါဘူး ။ ဒါကို ငါတို့က ထည့မှတှကပွဲ ဇှတပွဈတော့ တို့နရောတှကေို လယောဉတှှကေ အတိအကှ သိသှားပီး တို့တှေ ရရလညေလွေညကွို ခံလိုကရှတာပဲ ” တဲ့ဗှာ ။
ဒီအခကှကွို သငခွနှးစာယူပီး ဆာဘလှကှေောငှးကာတပဖွှဲ့ဟာ ပထမ ညမှာ SAM တှနေဲ့ တခကှမွှ မပဈပါဘူး ။
ဆာဘလှကှေောငှးကာတပဖွှဲ့ရဲ့ ရညရှှယခွကှဟှာ မိမိနိုငငှံရဲ့ ဝဟငွကေို ကာကှယဖွို့ထကှ မိမိတပမွပကှရှေးကိုသာ ဦးတညသှှားတဲ့သဘောပါ ။
ဆာဘလှကှေောငှးကာတပရှှိနသရှေေ့ NATO လတပအှပေေါှ ခှိမှးခှောကမွှု တခု အဖှဈဆကလွကတွညရှှိနပေီး လယောဉတှှဟော အမှင့ပှေ ၁သောငှးခှဲအထကကွနေ ဆကလွကပွှံသနှးရတော့မှာ ဖှဈပါတယှ ။
စဈဆငရှေး တလှှောကလွုံး ဒီလို ကန့သှတခွကှကွို တောကလှှကဖှှဈေပေါနှစဖေေို့ ဆာဘလှကှေောငှးကာတပဟှာ အပှတအှသတပွဈခတတွာမိုးမလုပပွဲ နှောကယှှကပွဈခတတွာမိုး လုပဖွို့ပဲ ရညရှှယထွားလိုကပွါတော့တယှ ။
ဗိုလခွှုပကွလခှ အနနေဲ့ ပထမညမှာတငှ သတမွှတထွားတဲ့ အှခစေိုကပွဈမှတတှှအေားလုံးကို ပဈခတဖွကှဆွီးနိုငခွဲ့တဲ့အတှကှ ကှနပမွေိပမေဲ့ ဆာဘလှကှေောငှးကာတပရှဲ့ ငှိမသှကနှမှေုအပေါမှှာတော့ မခငှ့မှရဲဖှဈမိပါသတဲ့ ။
ဆာဘလှတပွမှော စဈလယောဉှ အစငှး ၂၃၀ ကှောရှှိပီး ရုရှားထုတှ MIG – 29 ၁၅ စငှး နဲ့ MIG – 21 ၆၄ စငှးအပါအဝငှ ကိုယတွိုငထွုတှG –4Supergaleb မှပှငတွေိုကခွိုကရှေးလယောဉတှှလညှေး အစငှး ၈၀ ကှောရှှိနပေါတယှ ။
ဗိုလခွှုပကွလခအှတှကှ အာသာပှစရောကတော့ ဆာဘလှတပွကေ MIG – 29 ၄ စငှးဟာ စဈဆငရှေးရဲ့ ပထမညမှာ လပေေါပှံတကလွာခဲ့တာပါ ။
၄ စငှးထဲက ပထမ တစငှးဟာ အငဂွငှခွို့ယှငှးလို့ ခကှခွငှးပှနဆွငှးသှားရပါသတဲ့ ။
နောကထွပှ ၃ စငှးကိုတော့ NATO လယောဉတှှကေ ပဈခှ လိုကပွါတယှ ။
အမရေိကနှ F -15 တှကေ ပဈခတလွိုကလွို့ MIG – 29 ၂ စငှးဟာလပေေါတှငပှေါကကွှဲပကှစွီးသှားပီး နယသှာလနှ F – 16 နဲ့ ရငဆွိုငရှတဲ့ MIG – 29 ၁ စငှးဟာ အရေးပေါပှှနဆွငှးသှားရပါတယှ ။ ဒီလယောဉဟှာ ဆငှးနကှေ ကှငှးမှာ ဆငှးဖို့လုပပှမေဲ့ အဲ့ဒီကှငှးကို NATO က ကှိုပီးဗုံးကှဲထားလိုကပွါပီ ။ ဒီအတှကှ ပိုဝေးတဲ့ နီကိုလာတကဈွလာ လယောဉကွှငှးအထိ ဆကပွှံရပီးမှ ဆငှးနိုငပွါတော့တယှ ။ ဒါပမေဲ့ နောကထွပတွကှိမပွှံတကတွိုကခွိုကနွိုငဖွို့ မဖှဈနိုငလှောကအှောငထွိ ပကှစွီးသှားခဲ့ပါတယှ ။
ဒီ့နောကမွှာတော့ ဆာဘလှတပွပေိုငှးလော့တှကေိုယတွိုငကွ ပှံသနှးမိန့ကှို ငှငှးဆနတွာတှေ လုပလွာတော့တာပါပဲ ။
” လယောဉအှစုတပွလုတတှှနေဲ့ ကမဘွာ့အကောငှးဆုံးလတပွကေို ယှဉမွတိုကခွိုငှးနဲ့ ။ တခိနလွုံး လတပွကေို လစှလွှူ ရှု့ခဲ့တယှ ။ ပှငထွိနှးတှသခှေောလုပမွပေးခဲ့ဘူး ။ စဈဖှဈခါနီးမှ ဖုတပွူမီးတိုကှ MIG – 29 တခို့ထုတပှေးပီး ကှုပတွို့အသကကွို အခှောငှ မစတေးနဲ့ ” ဆိုတဲ့ ခံယူခကှတှှဟော ဆာဘလှတပွထေဲမှာ စတငှ ပှံ့နှံ့သှားပါတော့တယှ ။
ကောငှးကငယှံထကဝှဲပှံရငှး ဂငှနွိုဆိုဒကွိုတိုကဖွကှသှူ အပိုငှး – ၅
ဒုတိယညမှာ ဆာဘလှတပအှပှေငှ ဆာဘလှကှေောငှးကာတပကွလညှး ပှနလွှနပွဈခတတွာတှလေုပလွာပါတယှ ။
ဒုတိယညမှာ ဆာဘလှကောတပဟှာ SAM ဒုံးပှံ ၁၀ လုံးကို ပဈလှှတခွဲ့ပီး NATO လယောဉတွစငှးကိုမှ မထိခဲ့ပါဘူး ။ အဲ့ဒီ ၁၀ လုံးထဲကမှ ၁ လုံးဟာ ကိုယ့လှယောဉကွိုယပှှနပွဈမိသှားခဲ့ပါသေးတယှ ။
ဖှဈစဉကွတော့ ဒုတိယညမှာ MIG – 29 တစငှးဟာ စပှံတကခွါစမှာပဲ electric generator ပကှသှှားပီး အောကမွှာရှိတဲ့ ဆာဘရှဒေါတှနေဲ့ အဆကအှသှယပှှတသှှားပါတယှ ။ အကိုးဆကကွတော့ ဆာဘလှကှေောငှးကာတပတှှကေိုယတွိုငကွ အဲ့ဒီလယောဉကွို ရနသှူ့လယောဉနွဲ့ မှားပီး ပဈခှ လိုကမွှိပနပွါတယှ ။ ဆာဘလှတပွထေဲမှာ ပှံသနှးမိန့ကှို ငှငှးဆနမွှုဟာ တိုးသထကတွိုးလာပါတယှ ။
NATO လတပွကတေော့ ဒုတိယရကမွှာလညှး ရှေ့တနှးမှာ ရှိတဲ့ သာမနဆွာဘစွဈကှောငှးတှကေို မပဈသေးပါဘူး ။ နောကပွိုငှးလုံခှုံရာမှာခိုအောငှးနတေဲ့ ဆာဘဗွိုလခွှုပတှှေ နဲ့ သူတို့ရဲ့ အမိန့ပှေးဌာနခှုပတှှကေိုပဲ ပဈသေးတာပါ ။
ဆာဘလှယောဉကွှငှးတှေ လကှေောငှးကာစခနှးတှေ ရဒေါတှေ ခဲယမှးသိုလှောငရှုံတှေ ကိုတော့ ရရလညေလွေညှ ပဈခှငှးပါတယှ ။
စဈပှဲမစတငခွငကွတညှးက အမှတှ ၃ ဆာဘတွပမွတောရှဲ့တပဖှှန့ခှှဲပုံ မူမမှနတွဲ့အကှောငှး CIA က ဗိုလခွှုပကွလခှ ဆီကို အစီရငခွံခဲ့ပီးသားပါ ။
စဈပှဲလညှးစတငရှော အမှတှ ၃ ဆာဘတွပမွတောဟှာ ကိုဆိုဗိုဒသကေို နရောအနှံ့ကနစေိမ့ဝှငလွာပီး အှခပှေုနရောယူတာတှေ လုပတှော့တာပါပဲ ။
ဗိုလခွှုပကွလခှ အနနေဲ့ သှကသှှကလွကလွကှ ဝငကွိုငပွဈခငှပှမေဲ့ NATO နိုငငှံရေးသမားတှကေ စီမံခကှရှေးဆှဲတဲ့ အတိုငှးပဲ ဗုံးကှဲစလေိုတာမို့ သညှးခံနရပေါတယှ ။
စီမံခကှအှတိုငှးဆိုရငှ ၁ ပတတွိတိ မဟာဗှူ ဟာမှောကပွဈမှတတှှကေိုသာ ပဈခတရှမှာဖှဈပါတယှ ။
ဒီလို ပထမ ၁ပတှ ပဈခတမွှုကို phase – 1 လို့သတမွှတထွားပါတယှ ။
တတိယညမှာလညှး NATO ဟာ ထုံးစံအတိုငှး ဆာဘလှကှေောငှးကာတပှ လတပှေ နဲ့ အမိန့ပှေးဌာနခှုပတှှကေိုပဲ ဆကပွဈနတေုနှးပါပဲ ။
အထကကွဇှတဖွိပီး အမိန့ပှေးလို့ ဆာဘှ MIG – 29 ၂ စငှးဟာ တတိယနေ့မှာ လပေေါပှံတကလွာခဲ့ပါတယှ ။ ဒါပမေဲ့ NATO လယောဉတှှကေို ရငမွဆိုငခွငှလွို့ MIG ပိုငှးလော့တှကေ ရှောငထွှကပွှံသနှးပမေဲ့ ဒါမိုးဆိုပဈခငှလွှနှးလို့စောင့နှတေဲ့ NATO ပိုငှးလော့တှကတေော့ ဘယလွကလွှှတခွံလိမ့မှလဲဗှာ ။ MIG – 29 ၂ စငှးလုံးကို ရအောငပွဈခှ လိုကတွာပေါ့ ။
ဒီ့နောကမွှာတော့ စဈဆငရှေးတလှှောကှ ဆာဘတွိုကလှယောဉပွှံတှဟော နောကထွပှ ပှံတကတွိုကခွိုကမွှုတကှိမမွှတောငှ ထပမွလုပရှဲတော့ပါဘူး ။
စဦး ၃ ရကအှတှငှး တိုကရှိုကတွိုကခွိုကခှှငှးမခံရတဲ့ အမှတှ ၃ ဆာဘတွပမွတွကော စဈကှောငှးတှဟော ကိုဆိုဗိုဒသေ အနှံ့အပှားမှာ အှခစေိုကမွိနပေါပီ ။
ဒီနောကမွှာတော့ အမှတှ ၃ ဆာဘတွပမွတွနောဲ့အတူလိုကလွာတဲ့ ဆာဘရှဲ ၂ သောငှးဟာ ကိုဆိုဗိုရဲ့ မှို့ပှတှမှော တအိမတွကဆွငှး လူဖမှးပှဲ သတပွှဲ လုယကပွှဲတှေ စလုပနှပေါပီ ။
ဆာဘပှှညသှူ့စဈ ၁ သောငှးခှဲဟာလညှး ကိုဆိုဗိုက အလဘှေးနီးယနှးကှေးရှာတှကေို စီးနငှးတိုကခွိုကပွီး လူသတှ မီးရှို့ မုဒိနှးကငှ့ှ တာတှေ စလုပနှပေါပီ ။
အမှတှ ၃ ဆာဘတွပမွတောဟှာ နိုငငှံတကာအသိအမှတပှှု အမှဲတမှးတပမွတွတောရပရှဲ့ ဂုဏသှိကခွာနဲ့ ညီစှာ ကငှ့ကှှံရငှး ရနသှူကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့တိုကခွိုကရှမဲ့အစား လကနွကမွဲ့ အရပသှားတှပေေါမှှာ မတွမောတရားပှုကငှ့ပှီး ယုတမွာရကစွကမွှုတှကှေူ းလှနဖွို့ ခှလှမှေး စတငလွိုကပွါပီ ။
ဒါတှဟော မတွတောဆ ခှလှနလွေကလွှနလွုပမွိတာမိုးမဟုတပွဲ သခှောကို ရညရှှယခွကှရှှိရှိနဲ့ စနဈတကှ ကှိုတငှ အစီအစဉဆွှဲပီး ကှူ းလှနတွဲ့ ရာဇဝတမွှုကှီး ဖှဈပါတယှ ။
ဆာဘတှှဟော NATO ရဲ့ Operation Allied Force ကိုတုန့ပှှနဖွို့ Operation Horseshoe ဆိုပီး အလဘှေးနီးယနှးတှအပေေါစှနဈတကှ အကှကခွပှီး ရကရှကစွကစွကှ နှိပကွှပတွာပါ ။
ဗိုလခွှုပကွလခှ အနနေဲ့ ဆာဘတှှရေဲ့ ငရဲခနှးစဈဆငရှေး Operation Horseshoe ကို တားဆီးနိုငပွါ့မလား ?
ကောငှးကငယှံထကဝှဲပှံရငှး ဂငှနွိုဆိုဒကွိုတိုကဖွကှသှူ အပိုငှး – ၆
( က ) အစုလိုကအှပှုံလိုကသှတဖှှတခှှငှးမှား
ဗုံးကှဲစဈဆငရှေးစပီးလို့ တပတအှကှာ ၁၉၉၉ ဧပှီလ ၂ ရကှ နေ့မှာ ဆာဘစွဈကှောငှး တခုဟာ ကိုဆိုဗိုဒသေ မလဈရှိဗို ရှာကို ဝငရှောကလွာပါတယှ ။
ရှာထဲမှာရှိတဲ့ အလဘှေးနီးယနှးတှဟော ရှာကနထှကပှေှေးကှပါတယှ ။
မှပေးနိုငပွဲ ကနှရှဈသူ ; ပှေးတာနောကကွပှီး ဆာဘတွပဖွှဲ့တှရေဲ့ ဖမှးဆီးခံရသူတှဟော ဘယလွိုကံကကမွှာနဲ့ ရငဆွိုငရှပါသလဲ ?
မလဈရှိဗို ရှာသား Bali Tachi ဟာ ဆာဘစွဈကှောငှးပှနလွညထွှကခွှာသှားခိနမွှာ ရှာထဲကို ပှနဝှငလွာပါတယှ ။ သူ့အိမအှပါအဝငှ အိမအှတွမောှားမှားကိုပါ ဆာဘတှှကေ မီးရှို့သှားတာပါ ။
ဒါပမေဲ့ အိမတွခို့ဟာ လုံးဝပှာကှ သှားတာ မဟုတတွာမို့ တခို့ပဈစညှးတှကေို အကောငှးအတိုငှးပှနရှလိုကတွာရှိပါတယှ ။ အဲ့ဒီထဲကမှ အဖိုးတနတွာကတော့ ကငမွရာပါ ။
အကောငှးအတိုငှးကနှနှတေဲ့ ကငမွရာကို သုံးပီး Bali ဟာ ဆာဘတှှလေုပသှှားတာတှကေို မှတတွမှးတငပွါတော့တယှ ။ သတဖှှတခွံလိုကရှတဲ့ အလောငှးတှကေို တောကလှှောကမွှတတွမှးတငပွါတယှ ။ ထှကပှှေးရငှး ဆာဘတှှဖမှေးဆီးတာ ခံလိုကရှတဲ့ ရှာသားတှအစေုလိုကအှသတခွံထားရတာကိုလညှးမှတတွမှးတငနွိုငခွဲ့ပါတယှ ။
တပှိုငနွကတွညှးမှာပဲ အနီးနားက Buri ရှာမှာ ဆာဘတှှဟော ဒီလိုလူသတပွှဲလုပသှှားတယလွို့ သတငှးကှားရပါတယှ ။ Buri ရှာဟာ Bali ရဲ့ဦးလေး ခိုလှုံနတေဲ့ရှာပါ ။
Bali အနနေဲ့ ဆာဘစွဈကှောငှးတှကေို ရှောငရှှားရငှး Buri ရှာကို ၃ နာရီကှာအောငှ လမှးလှှောကသှှားရပါတယှ ။ ရောကတွာနဲ့ ကငမွရာကို ထုတပွီး တောကလှှောကမွှတတွမှးတငတွာပါ ။ မှတတွမှးတငတွာကိုကှားထဲမှာ ရပမွပဈပါဘူး ။ fake video လုပတွယလွို့ အစှပစွှဲမခံနိုငလွို့ပါ ။ ဆာဘတှှဟော အလဘှေးနီးယနှးရှာသား ၃၆ ယောကကွိုသတဖှှတသှှားပါတယှ ။ တောကလှှောကမွရပတွနှး တလောငှးခငှးကို အသေးစိတမွှတတွမှးတငရှငှး Bali နောကဆွုံးတှေ့ရတဲ့ အလောငှးကတော့ သူ့ဦးလေးအလောငှးပါပဲ ။ ဆာဘတှှဟော သူ့ဦးလေး လညပွငှးကို လှီးဖှတရှုံတငမွကပဲ လှီးဖဲ့ယူသှားတာပါ ။
အလောငှးတိုငှး အလောငှးတိုငှးကိုလညှး အဲ့ဒီလို ပုံပကှပွနှးပကှဖှှဈအောငှ ဖကှဆွီးခဲ့တာခညှ့ပှါပဲ ။
Bali ရဲ့ မှတတွမှးဟာ အတွတောာသှားပါတယှ ။
Unique Record of Serb’s Ethnic Cleansing = ဆာဘတှှရေဲ့လူမိုးရေးရှငှးလငှးမှုကို ဖကပှှိုငှ ( ငှငှးဆနလွို့မရအောငှ ) မှတတွမှးတငပွီးသားဖှဈသှားပါတယှ ။
Bali ရဲ့မှတတွမှးဗီဒီယိုကှောင့ှ ” NATO ဗုံးကှဲလို့ လူတှထှကပှှေေးရတယှ ” ဆိုတဲ့ ဆာဘတှှရေဲ့ဝါဒဖှန့မှှုဟာ အလိမအှညာဖှီးလုံးသာဖှဈကှောငှးပေါလှှငသှှားပါတယှ ။
ရနသှူရဲ့ အစိုးရအဆင့ဝှါဒဖှန့စှကားကို သာမနရှှာသားတယောကရှဲ့ ဗီဒီယိုကငမွရာလေးက ခှဖကှပွေဈလိုကတွာပါ ။
ကိုယ့လှူတှရေဲ့ လကထွဲက ဖုနှးတှကေို အားအပှည့သှာဖှည့ထှားပါ ။အဲ့ဒီမှာ ကငမွရာရော ရီကဒွောါရော အငတွာနကခွိတဆွကမွှုတှပေါ ပါပါတယှ ။
လကနွကကှှီးတခုဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့ ။
ဆာဘတွပဖွှဲ့တှဟော ဒီလိုအစုလိုကအှပှုံလိုကသှတဖှှတမွှုတှကေို ရာနဲ့ခှီ ပှု လုပခွဲ့ပါတယှ ။
ဝဟငပှေေါမှှာ NATO လယောဉတှှေ တဝီဝီပှံနတေုနှး မှပှငပှေေါမှှာ ဆာဘစွဈကှောငှးတှကေ လူသတပွှဲတှေ နှှဲကှတာပါ ။
NATO ဗုံးကှဲနစဉအှတှေငှး ဆာဘတှှလကွခကှေနွဲ့ အလဘှေးနီးယနှး အရပသှား ၁ သောငှးကှောှ အသကဆွုံးရှုံးခဲ့ရပါတယှ ။
အမရေိကနှ ရှေ့နမှေားအသငှးရဲ့ ခန့မှှနှးခကှအှရ Operation Horseshoe ကှောင့ှ အလဘှေးနီးယနှး အရပသှား ၁၀၅၀၀ သဆေုံးခဲ့ရပါတယှ ။
ဆာဘတှှဟော ဒီလို အစုလိုကအှပှုံလိုကလွူသတပွှဲနှှဲဖို့ စဈကှောငှးထှကတွဲ့အခါ ဆာဘတွပမွတောယှူနီဖောငှးကို မဝတပွဲ အရပဝှတတှှှပေောငှးဝတပွါတယှ ။ မကှနွှာဖုံးတှစညှေး သိုးမှေးခေါငှးစှပတှှေ စှပပွီး ရုပဖွကှကှှပါတယှ ။ NATO လယောဉတှှကေ ပဈမှာကှောကလွို့ ဆာဘတွပမွတောသှုံးထရပကွားတှကေိုတောငှ မသုံးပဲ အလဘှေးနီးယနှးဒုကခွသညတှှသေုံးတဲ့ ထရပကွားစုတတှှနေဲ့ စဈကှောငှးထှကကှှပါသတဲ့ ။ ထရပကွားပေါမှှာ UN က ဒုကခွသညတှှအတှကပှေေးတဲ့ မိုးကာတဲတှကေိုတောငှ ခိတဆွှဲထားတာမိုးတှေ လုပကှှပါသတဲ့ ။
အမှဲတမှးတပမွတွတောရပရှဲ့ ဂုဏသှိကခွာနဲ့မလှောညှီတဲ့ ပှုကငှ့မှှုတှကေို ဆာဘစွဈသား ယကှေားရင့မှကှီးတှကေ သူရဲဘောကှောငစွှာ ကှူ းလှနခွဲ့ကှတာပါ ။
ကောငှးကငယှံထကဝှဲပှံရငှး ဂငှနွိုဆိုဒကွိုတိုကဖွကှသှူ အပိုငှး – ၇
( ခ ) အထောကအှထားမှားကိုဖှောကဖွကှခှှငှး
Bali တို့လို အလဘှေးနီးယနှးရှာသားတှကေ အထောကအှထားမှတတွမှးတှယေူနိုငတွဲ့အခါမှာတော့ ဆာဘတှှဟော အထောကအှထားတှကေို ဖှောကဖွကှဖွို့လုပပွါတော့တယှ ။
ဆာဘတွပဖွှဲ့တှဟော လူတှကေို သတပွီးရငှ အလောငှးတှကေို ရုပပွကှဆွငှးပကှဖှှဈအောငဖွကှဆွီးပီးတော့ အငွကြှ ီတှေ လှှဲဝတပှေးတာ ; မှမမှေုပခွငှ အလောငှးတှကေို မီးရှို့ပဈတာ ; မှုပထွားတာတှှပနဖှပွေောီး တခှားနရောတှမှော ရှှေ့မှုပတွာ ; သတထွားတဲ့အလောငှးတှကေို သဘာဝအတိုငှးသဆေုံးသူတှှမေုပနွှံထားတဲ့ သငွခြှ ိုငှးဟောငှးတှမှော ရောမှုပတွာ တှေ လုပကှှပါတော့တယှ ။
ဒါတှကေို လုပတွာဟာ အောကခှှဆောဘတွပသှားတှလေောကကွ လုပတွာမဟုတပွဲ ဗဟိုဆားဘီးယားအစိုးရကိုယတွိုငရှဲ့ညှှနကှှားခကှနွဲ့လုပတွာပါ ။ ပှဲစဉတှှအပေီးမှာ ဆာဘပှှညထွဲရေးဝနကှှီးကိုယတွိုငကွ သဲလှနစွတှဖှေောကဖွကှဖွို့လမှးညှှနအှမိန့ဟှာ သမမွတမီလိုဆီဗဈကိုယတွိုငထွုတဆွင့ခှဲ့တာဖှဈကှောငှး ဖောကှောငလွုပပွါတော့တယှ ။ [ မီလိုဆီဗဈအစိုးရအဖှဲ့ဟာ အလဲလဲအကှဲကှဲလညှးဖှဈရော တရားရုံးမရောကသှေးခငမွှာတောငှ ဒီလိုဖောကှောငတှှေ ပှနလွုပကှှတာ အကှိမကှှိမှ မှငရှပါလိမ့မှယှ ။ ]
၁၉၉၉ မတလွ ၂၉ ရကနှေ့ Trnje မှာ ဆာဘတွပဖွှဲ့တှဟော လှနခွဲ့တဲ့ ၄ ရကကွ သူတို့သတသှှားတဲ့ လူ ၃၀ ရဲ့အလောငှးတှကေို ထရပကွားနဲ့ လာသယထွုတသှှားပါတယှ ။ အဲ့လိုပှနလွာသယမွှပဲ မကှမှှငသှကသှတှေေ ပိုရကုနပွီး witness တှကေ နိုငငှံတကာကို အကှောငှးကှားပါတော့တယှ ။
၁၉၉၉ ဧပှီလ ၁၆ မှာ ဆာဘတွပဖွှဲ့တှဟော Slovinje ရှာမှာ အရပသှား ၁၆ ယောကကွို သတသှှားပါတယှ ။ အသကရှှငကွနှနှရဈတေဲ့ ရှာသားတှကေ အလောငှးတှကေို မှုပနွှံခဲ့ပါတယှ ။
နောကရှကမွှာ ဆာဘတွပတှှကေ အဲ့ဒီအလောငှးတှကေို ပှနဖှပွောီး ထရပကွားနဲ့ သယယှူသှားပါသတဲ့ ။
ဒီနရောမှာ သငခွနှးစာယူစရာက အလောငှးတှကေို မှုပပှေးရုံတငသှာမကပဲ မမှုပခွငှ မှုပနှစဉှေ နဲ့ မှုပပွီးခိနတှှမှော ပါ ဗီဒီယို မှတတွမှးတငသှင့ပှါတယှ ။
ရနသှူက ပှနလွာဖပွောီးယူသှားနိုငတွယဆွိုတာကိုလညှး မှှလွောင့ထှားရပါမယှ ။ လိုအပရှငှ ရနသှူပှနအှလာကို စောင့နှပေီး မှတတွမှးတငဗွီဒီယိုရိုကဖွို့ပါပှငထွားသင့ပှါတယှ ။ တတနွိုငရှငှ ရနသှူပှနအှထှကမွှာ ခှုံခိုတိုကပွှဲဆငသှင့ပှါတယှ ။ KLA တပတှှကတေော့ အဲ့လိုခှုံခိုတိုကတွာမိုး လုပလှေ့ရှိပါတယှ ။
၁၉၉၉ ဧပှီ ၁၇ Poklek ရှာမှာ ဆာဘတှှကေ အရပသှားတှကေို အုပစွုလိုကအှိမထွဲမောငှးသှငှး လကပွဈဗုံးနဲ့ထုပီး အိမတှှကေို မီးရှို့ခှ လိုကပွါတယှ ။
ကနှရှဈတဲ့ အလဘှေးနီးယနှးရှာသားတှကေ မီးကှှမှးလို့သသှေားသူတှရေဲ့ အရိုးတှကေို စုပီးသတွတောထဲသိမှးထားခဲ့ပါတယှ ။ ပီးတေ
ာ့ HRW လကထွဲကို အပခွဲ့ပီး အမှုတှဲတညဆှောကနွိုငခွဲ့ပါတယှ ။
Kotlina ရှာမှာတော့ ဆာဘတွပတှှကေ အရပသှား ၂၂ ယောကကွို သတဖှှတခွဲ့ပီး အလောငှးတှကေို ရတှငှေးထဲပဈခှ ; ရတှငှေးကိုပါ မိုငှးကပပွီးဖကှဆွီးခဲ့ပါတယှ ။
သတဖှှတပွှဲတှလေုပပွီး အထောကအှထားတှကေို နရောမှာတငှ ဖှောကဖွကှတွာ သာမကပဲ ဆားဘီးယားပှညမွကှီးထဲကိုပါ သယထွုတသှှားတာလညှးရှိပါသေးတယှ ။
အလောငှးသယတွဲ့ ရခေဲတိုကကွားတှနေဲ့ ပှနသှယထွုတတွာပါ ။
ဆားဘီးယားနိုငငှံရဲ့ ဒငှးညူ ဗမှှဈထဲမှာ အလဘှေးနီးယနှးအလောငှး ၈၆ လောငှးပါတဲ့ ကားတစငှးသောငလွာတငတှော့ ဒီလိုသယသှှားတာတှေ ပေါလှာပါတယှ ။
ပှဲစဉအှပီးမှာ ဆာဘစွဈဘကှ အရပဘွကှ အဖှဲ့ဝငတှှဟော ဒီလို သတဖှှတမွှုနဲ့ အလောငှးဖှောကမွှုတှကေို သူတို့အခငှးခငှးလကညှိုးထိုးအပှဈပုံခဖှောကှောငလွုပကှှပါတော့တယှ ။
အမညမွဖလွောိုတဲ့ ဆာဘထှောကလွှမှးရေးအရာရှိတဦးက Trepka ဒသမှော အလောငှးပေါငှး ၁၅၀၀ လောကကွို ဖှောကဖွကှပွဈခဲ့ကှောငှး ဖောကှောငလွုပပွါတယှ ။
၂၀၀၁ ဇူလိုငှ မှာတော့ အသဈတကလွာတဲ့ ဆားဘီးယားအစိုးရကိုယတွိုငကွ ဆားဘီးယားပှညမွကှီးထဲမှာ အလဘှေးနီးယနှး ၁၀၀၀ ကှကွောို စုပီးမှုပထွားတဲ့ သငွခြှ ိုငှး ၄ ခု ထပတှှေ့ကှောငှး ကမဘွာသိ ကှှငောလိုကပွါတယှ ။
မီလိုဆီဗဈကို ICTY ရုံးတမွောှာ စီရငဖွို့လုပနှခေိနမွို့ အဆငှးဘီးတပပှေးတဲ့ အနအထေားပါ ။
ဆာဘအှခငှးခငှး ဖောကှောငလွုပရှငှး ပှနဆှောကှှတာပါ ။
ကောငှးကငယှံထကဝှဲပှံရငှး ဂငှနွိုဆိုဒကွိုတိုကဖွကှသှူ အပိုငှး – ၈
လူတယောကကွိုသတလွိုကတွယှ ။ ပီးတော့ အလောငှးကိုဖှောကလွိုကတွယှ ။ ဒီလိုဖှဈစဉမွှာတော့ ရာဇဝတမွှုကို ဖုံးကှယနွိုငကှောငှး ဖုံးကှယနွိုငပွါလိမ့မှယှ ။
ဆာဘတှှအနနေေဲ့ ဒီလိုအစုလိုကအှပှုံလိုကသှတဖှှတပွီး အလောငှးတှကေို ပုံပကှအှောငလွုပတွာ ; မီးရှို့တာ ; နရောပှောငှးမှုပတွာ ; ဖှောကဖွကှပွဈတာတှကေ အလောငှးတခုခငှးစီအတှကှ ဘယသှူဘယဝှါလို့ ရှာဖှသတွမှတေဖွို့ခကခွဲသှားစပေါတယှ ။
case တခုခငှးစီအတှကှ အထောကအှထားရဖို့ခကသှှားစပေါတယှ ။ ဒါပမေဲ့ ရာဇဝတမွှုကှီးတှှဖဈပှေားကှောငှးခှုံငုံသုံးသပဖွို့ကတှော့ အခကှအှလကတှှေ ပိုမိုခိုငမွာသှားစပေါတယှ ။ ဒီလိုဖကှဆွီးဖှောကဖွကှမွှုတှကှေောင့ှ ဒီရာဇဝတမွှုကှီးတှဟော စဈတိုကရှငှးမတွတောဆ ဖှဈတာမဟုတပွဲ ရညရှှယခွကှရှှိရှိနဲ့ စနဈတကှ ကှူ းလှနခွဲ့တာဖှဈကှောငှး ငှငှးမရတော့ပါဘူး ။
ပှဲစဉတှှအပေီးမှာ ဆာဘအှခငှးခငှး ဖောကှောငလွုပတွာရှိသလို နိုငငှံတကာဘကကွ အထောကအှထားအခိုငအှမာနဲ့ ဖထွောုတနွိုငတွာတှရှေိပါတယှ ။
၁၉၉၉ နိုဝငဘွာလမှာ ICTY ရုံးတကွော အလောငှးပေါငှး ၂၁၀၀ ကို စုမှုပထွားတဲ့ သငွခြှ ိုငှး ၁၉၅ ခုကို ဖထွောုတနွိုငခွဲ့ပါတယှ ။
၂၀၀၀ ပှည့နှှဈ နိုဝငဘွာ မှာလညှး ICTY ရုံးတကွော အလောငှးပေါငှး ၁၅၀၀ ကှကွောို စုမှုပထွားတဲ့ သငွခြှ ိုငှး ၃၂၅ ခုကို ထပမွံဖထွောုတနွိုငခွဲ့ပါတယှ ။
နောကပွိုငှး Izbica ; Trepka ; Mala Krusha ; Crkolez ဒသတှမှေော ဆကတွိုကထွပပွီး ဖထွောုတနွိုငခွဲ့ပါတယှ ။
ဆာဘတှှအနနေေဲ့ ရာဇဝတမွှုတှကေို တခုခငှးဖုံးကှယဖွို့ ကှိုးစားအားထုတရှငှး ဖှဈစဉအှားလုံးကို ရညရှှယခွကှရှှိရှိ စနဈတကနှဲ့ ကယှကွယှပှှန့ပှှန့ှ ကှူ းလှနခွဲ့ကှောငှး ဝနခွံသလိုဖှဈသှားတာပါ ။
( ဂ ) ကှူ းလှနရှခှငှးရဲ့ ရညရှှယခွကှ
ဆာဘတှှအနနေေဲ့ ဒီလိုအစုလိုကအှပှုံ လိုကသှတဖှှတမွှုတှကေို လုပရှတဲ့ ရညရှှယခွကှကွတော့
အလဘှေးနီးယနှးတှကေို ကိုဆိုဗို ဒသကနေေ အပှီးတိုငှ မောငှးထုတခွငှလွို့ပါပဲ ။
Operation Horseshoe ရဲ့ စဈဆငရှေးရညမွှနှးခကှမွှာလဲ အဲ့ဒီအတိုငှး အတိအလငှးရေးထားတာပါ ။
Operation Horseshoe ရဲ့ စဈဆငရှေးစီမံခကှတွခုလုံးကို ဘူလဂှေးရီယားထောကလွှမှးရေးက ရရှိခဲ့ပီး NATO အဖှဲ့ဆီ လှှဲပှောငှးပေးခဲ့ပါတယှ ။
ထူးခှားတာက NATO ဗုံးမကှဲခငကွတညှးက ဆာဘတှှဟော ဒီလိုအစုလိုကအှပှုံလိုကသှတဖှှတမှောငှးထုတတွဲ့ စဈဆငရှေးကို လုပဖွို့ပှငဆွငနှတောပါ ။
NATO ဗုံးကှဲလို့ လကစွားခှတေဲ့အနနေဲ့ လုပတွာမဟုတပွဲ အစကတညှးက လုပဖွို့ ဆာဘတှှကေ စီမံကိနှးခထှားတယှ ဆိုတာလညှး ထငရှှားသှားပါတယှ ။
ကိုဆိုဗားအလဘှေးနီးယနှး ၁.၇ သနှးအနကှ ၁.၃ သနှးကို ဆာဘတှှကေ မောငှးထုတခွဲ့ပါတယှ ။
ဒီလိုမောငှးထုတရှာမှာ ဆာဘတှှဟော လူသတတွာအပှငှ မုဒိနှးကငှ့တှာ ; နအေိမတှှကေိုဖကှဆွီးတာ ; ပဈစညှးဥဈစာတှကေို လုယူတာတှေ ကယှကွယှပှှန့ပှှန့ှ ကှူ းလှနခွဲ့ပါတယှ ။
ဒီနရောမှာ ထူးခှားတာလေး တခုကို ထည့ပှှောခငှပွါတယှ ။
ဆာဘတှှဟော ရှေှငှအဖေိုးတနှဥဈစာပဈစညှးတှကေို သိမှးဆညှးရုံတငမွကပဲ ကိုဆိုဗားအလဘှေးနီးယနှးတှရေဲ့ လူပုဂဂွိုလတွဦးခငှးနဲ့ ပတသှတတွဲ့ စာရှကစွာတမှးအထောကအှထားတှကေိုလညှး မလှတတွမှး သိမှးယူဖကှဆွီးပဈတာပါ ။
( ဃ ) identity cleansing = ( တဦးခငှးစီ၏ ) ပုဂဂွလအမှတသှညာအထောကအှထားမှားကိုဖကှဆွီးခှငှး
အလဘှေးနီးယနှးတှပေိုငဆွိုငတွဲ့ ပကဈွပို့တှ လိုငစွငှ မှတပွုံတငှ သနှးခေါငစွာရငှးနဲ့ လိုငစွငပှှားတှပေါမခနှ ဆာဘတွပဖွှဲ့က သိမှးယူလိုကပွါတယှ ။
ဒီစာရှကစွာတမှးတှဟော ငှကှေေးအားဖှင့ှ လကဝှတလွကစွားတှလေို အဖိုးတနတွာမရှိပမေဲ့ အလဘှေးနီးယနှးတှနေဲ့ ကိုဆိုဗိုဒသရေဲ့ ဆကနွှှယမွှုကို ခိုငခွိုငမွာမာ ဖောပှှနတေော့ ဆာဘတှှကေ သိမှးဆညှးပဈတာပါ ။ ပီးတာနဲ့ ဖကှဆွီးပဈပါတော့တယှ ။
ဒီလိုဖှဈစဉတှှေ မှနမွာပှညမွှာ ထပခွါထပခွါ ဖှဈခဲ့ပါတယှ ။ အထငရှှားဆုံးကတော့ ရိုဟငဂွှာတှဆေီက ပနှးရောငကွဒတှှကေို သိမှးဆညှးပီး ဝှိုကကွဒတှှထေုတပှေး ; သိနှးစိနလွကထွကမွှာ အဲ့ဒီဝှိုကကွဒတှှကေိုပါ သိမှးဆညှးပီး ဘာကဒမွှထုတမွပေးတော့ပဲ အထောကအှထားဖှောကဖွကှပွဈတာပါ ။ တူလာတိုလီအစုလိုကအှပှုံလိုကသှတဖှှတမွှုမှာလညှး သတဖှှတပွီးတဲ့ရိုဟငဂွှာအလောငှးတှကေို မီးရှို့ရငှး အိမထှောငစွုဇယားတှေ အိမဂွရံမှဂရေံတှကေိုပါ ရောပီး မီးရှို့ပဈခဲ့တယလွို့ သိရပါတယှ ။
ဒီစာရှကတှှကေို အလောငှးတှမေီးရှို့ဖို့မီးမှေးရာမှာသုံးခဲ့တယလွို့ ICC အမှုတှဲ RoC46(3)-01/18 မှာ ဖတရှပါတယှ ။
ဒီလို အထောကအှထားတှကေိုဖှောကဖွကှခှှငှးတှဟော စာရှကစွာတမှးပှသနာ မဟုတပွါဘူး ။
ဒါဟာ identity cleansing လုပတွာပါ ။
Identity Cleansing ဟာ Genocide ရဲ့အစိတအှပိုငှးတရပဖှှဈပီး forced disappearence လို့ခေါတှဲ့ နိုငငှံတကာရာဇဝတမွှုမှောကတွဲ့ လုပရှပရှဲ့ ကနဦးခှလှမှေးအဖှဈလညှး သုံးသပလွို့ရပါသေးတယှ ။
ပှညမွထဲမှာ တဦးခငှးအလိုကှ လဝကအမှုတှဲပှောကဆွုံးတာတှေ ; ဘာမှပောညာမှပောနဲ့ မှတပွုံတငသှိမှးခံရတာတှဟောလညှး ဘယလှောကထွိကယှကွယှပှှန့ပှှန့ှ ဖှဈနသလေဲ ဆနှးစဈစရာပါ ။
ဆနှးစဈပီးလို့ အထောကအှထားခိုငရှငတှော့ နိုငငှံတကာရာဇဝတမွှုအဖှဈ အမှုတှဲတညဆှောကရှတော့မှာပါ ။
ကိုယ့လှူတှအနနေေဲ့ ကှုံ ခဲ့ရသမှှ ကို မှတတွမှးလုပတွတတွဲ့အကငှ့လှေး ရှိစခှငွပေါတယှ ။
ကောငှးကငယှံထကဝှဲပှံရငှး ဂငှနွိုဆိုဒကွိုတိုကဖွကှသှူ အပိုငှး – ၉
( င ) ပဈမှတထွားသုတသှငခှှငှး
ဆာဘတှှဟော ကှေးလကဒှသတှမှေော အဲ့ဒီလို အစုလိုကအှပှုံလိုကသှတဖှှတမွှုတှကှေူ းလှနခွဲ့သလို မှို့ပှဒသတှမှေောလညှး အလဘှေးနီးယနှးတဦးခငှးစီကို ပဈမှတထွားသုတသှငသှတဖှှတခွဲ့ပါတယှ ။ အဲ့ဒီလိုသတဖှှတဖွို့ ဆာဘရှဲတပဖွှဲ့ကို အှခခေံပီး special hit squad = အထူးလုပကှှံသတဖှှတရှေးတပဖွှဲ့ ကို ဖှဲ့စညှးခဲ့ပါတယှ ။ ဒီ့နောကမွှာတော့ ဆာဘတှှဟော မှို့ပှက အလဘှေးနီးယနှးပညာတတတှှကေို တအိမတွကဆွငှး ရှာဖှသတဖှှတေတွာတှေ လုပတှော့တာပါပဲ ။
ရာနဲ့ခှီတဲ့ အလဘှေးနီးယနှး နိုငငှံရေးတကှှကှလှုပရှှားသူတှေ ; ဆရာဝနတှှေ ; ရှေ့နတှေေ ; OSCE နဲ့ ပူးပေါငှးဆောငရှှကသှူတှဟော Operation Horseshoe အတှငှး သတဖှှတခွံရပါတယှ ။
– Bajram Kelmendi နှင့ှ သားနှဈယောကှ ။
ရှေ့နေ Kelmendi ဟာ အလဘှေးနီးယနှးနိုငငှံရေးအကဉှးသားတှအတှကှေ အမှုလိုကပှေးသူ ; ထငရှှားတဲ့ အလဘှေးနီးယနှးသတငှးစာ Koha Ditore အတှကှ အမှုလိုကပှေးသူ ; ICTY ရုံးတောအှတှကှ အခကှအှလကတှှေ ပှငဆွငပှေးသူ ဖှဈပါတယှ ။
ဗုံးကှဲစဈဆငရှေးစတဲ့ ၁၉၉၉ မတလွ ၂၄ မှာ ယူနီဖောငှးဝတမွထားတဲ့ ဆာဘရှဲ ၅ ယောကဟှာ Kelmendi တို့အိမတွံခါးကို ခိုးဖကှဝှငရှောကခွဲ့ပီး Kelmendi နဲ့သူ့သား၂ ယောကကွို ဖမှးဆီးသှားခဲ့ပါတယှ ။ နောကရှကမွှ ကားလမှးဘေးမှာ သားအဖ ၃ ယောကလွုံးရဲ့အလောငှးတှကေို အနီးကပတှေ့ပဈခံရတဲ့ ဒဏရှာတှနေဲ့ တှေ့ရပါတော့တယှ ။
ဒီသတဖှှတမွှုဟာ အလဘှေးနီးယနှး ပညာတတတှှကေို လှုပနွိုးလိုကသှလိုဖှဈသှားပီး တောတှမွောှားမှားက မှို့ပှကနေ ထှကပှှေးသှားကှပါတယှ ။
– ၁၉၉၉ မတှ ၂၅ မှာ Djakovica ဒသကေ Dr.Izet Hima ; Urim Texha နဲ့ Mark Malota တို့ကို ဆာဘတှှကေ သတဖှှတခွဲ့ပါတယှ ။ သူတို့မိသားစုဝငတှှရှေေ့မှာကို ပဈခတသှတဖှှတခွဲ့တာပါ ။
– ၁၉၉၉ မေ ၆ မှာ LDK ခေါငှးဆောငှ Fehmi Agani ကို သတဖှှတခွဲ့ပါတယှ ။ မီးရထားနဲ့ မကဆွီဒိုးနီးယားကို ထှကခွှာနစဉှေ ဆာဘရှဲတှဟော ရထားကိုရပတွန့စှပေီး Agani ကို ဖမှးခေါသှှားတာပါ ။ နောကရှကမွှ သူ့အလောငှးကို လမှးဘေးမှာတှေ့ရပှနပွါတယှ ။
– ထငရှှားတဲ့ အလဘှေးနီးယနှးကဗှာဆရာ Din Mehmeti နဲ့ စာရေးဆရာ Teki Dervishi တို့လညှး အသတခွံရပါတယှ ။
– အဆိုးဆုံးကတော့ Berisha မိသားစု ၂၄ ယောကကွို သတဖှှတပွဈတာပါ ။ ကလေး ၁၁ အပါအဝငှ တမိသားစုလုံး သဆေုံးခဲ့ရပါတယှ ။
ဒီလိုပဈမှတထွားသတဖှှတမွှုတှေ ရာခှှီဖဈခဲ့ပါတယှ ။ နာမညတွခို့ကို ထည့ရှေးနတောက အဲ့ဒီ အာဇာနညတှှကေို ကိုယ့လှူတှအမှတရှေစခငှလွေို့ပါ ။ ဒါပမေဲ့ကိုယ့လှူတှထေဲကနတေော့ အာဇာနညတှှေ မလိုခငှပွါဘူး ။ ပါးပါးနပနွပနွဲ့ ကှိုတငရှှောငထွှကကှှပါ ။
သတဖှှတမွှုကှူ းလှနတွဲ့ ဆာဘရှဲတပဖွှဲ့ဝငတှှဟော ပှဲစဉလွညှးပီးရော ဆားဘီးယားပှညမွကှီးထဲကို ပှေးဝငကှှပီး လှတအှောငရှှောငကှှပါတယှ ။
ဒီမှာ အဲ့ဒါမိုးလုပခွဲ့ရငတှော့ ပှနပှှေးဝငစွရာမှမရှေိစရပေါဘူး ။ ကှူ းလှနတွဲ့ကောငှ တကောငခွငှးစီနောကကွို အမဲလိုကသှလို ပှနလွိုကပွီး ပုံစံမိုးစုံနဲ့တုန့ပှှနစွီရငဖွို့ သံဒိဌာနခွှ အစီအစဉကှှိုဆှဲထားပါတယှ ။
မီလိုဆီဗဈရဲ့ အထူးလုပကှှံသတဖှှတရှေးတပဖွှဲ့ဟာ အလဘှေးနီးယနှးတှကေိုသာ လုပကှှံတာမဟုတပွါဘူး ။ မီလိုဆီဗဈကို အတိုကအှခံလုပတွဲ့ ဆာဘနွိုငငှံရေးသမားတှေ နဲ့ ဂှာနယလွဈတှကေိုလညှး သတဖှှတပွါတယှ ။
Slavko Curuvija ဟာဆိုရငှ မီလိုဆီဗဈပှဌာနှးတဲ့ ဆငဆွာဥပဒကေို ဝဖနွမေိတဲ့ ဂှာနယလွဈတယောကပွါ ။ ဆာဘရှဲတှကေ သူ့ကို အနီးကပတှေ့ပီး ပဈသတခွဲ့ပါတယှ ။ Curuvija ရဲ့မိနှးမကိုပါ ပဈသတပှမေဲ့ မသပေဲကနှခွဲ့လို့ ဖှဈကှောငှးကုနစွငကွို ကမဘွာကှီးက သိရတာပါ ။ ဒီလုပကှှံသတဖှှတမွှုဟာ စဈဖှဈနတေဲ့ကိုဆိုဗိုဒသမှောဖှဈပှားခဲ့တာ မဟုတပွဲ ဆားဘီးယားနိုငငှံရဲ့မှို့တောှ ဘဲလဂွရိတမွှာ ဖှဈပှားခဲ့တာပါ ။
Curuvija လုပကှှံခံရပီးခိနမွှာတော့ ကနှတွဲ့ ဆာဘနွိုငငှံရေးသမားတှဟော မှနတွီနီဂရိုးကို ထှကပှှေးကှပါတော့တယှ ။ အထငရှှားဆုံးထှကပှှေးရသူကတော့ Zoran Djindjic ပါ ။ သူဟာ Curuvija ရဲ့အသုဘက အပှနမွှာ အိမကွိုပှနမွဝငရှဲပဲ မှနတွီနီဂရိုးထိ မောငှးပှေးရပါတယှ ။ သူကံကောငှးသှားတာပါ ။ သတဖှှတဖွို့စာရငှးထဲမှာ သူဟာ နံပါတစွဉှ ၂ ပါ ။
အလဘှေးနီးယနှးတှကေို သတဖှှတပွီးဂငှနွိုဆိုဒလွုပတှော့ ဆာဘအှတိုကအှခံတှေ မီဒီယာသမားတှဟော အာဏာရမီလိုဆီဗဈနဲ့ သှေးစညှးညီညှတခွဲ့ပှခဲ့ပါတယှ ။
ဗုံးကှဲခံရခိနမွှာတော့ ဒီသှေးစညှးညီညှတမွှုဟာ အတုအယောငဖှှဈကှောငှး ပေါလှှငလွာပါတယှ ။
အာဏာရှိသူက အာဏာဆကရှဖို့ အခငှးခငှးလညှးသတဖှှတတှော့တာပါပဲ ။ လူသတသှမားတှရေဲ့ မှှားဦးမှာ လူမိုး ဘာသာ တံဆိပတွပမွထားပါဘူး ။ အာဏာရူးပီဆိုရငှ အခငှးခငှးလညှး ဆတွောာပါပဲ ။
ကောငှးကငယှံထကဝှဲပှံရငှး ဂငှနွိုဆိုဒကွိုတိုကဖွကှသှူ အပိုငှး – ၁၀
( စ ) မုဒိနှးမှုကှူ းလှနခှှငှးမှား
ဆာဘတွပဖွှဲ့တှရေဲ့ အဆိုးဝါးဆုံး အပှု အမူကတော့ အလဘှေးနီးယနှးအမိုးသမီးတှအပေေါမှှာ မုဒိနှးမှုတှေ ကှူ းလှနတွာပါ ။
မုဒိနှးမှုတှကေို အုပစွု ၃ စု ခှဲကှည့လှို့ရပါတယှ ။
– အိမတှှကေို ဝငရှောကစွီးနငှးစဉကွှူ းလှနခှှငှး
– ထှကပှှေးနသေောအမိုးသမီးမှားကိုလမှးပေါမှှာကှူ းလှနခှှငှး
– ဖမှးထားတဲ့အမိုးသမီးမှားအပေါှ အခှုပခွနှးအတှငှး ကှူ းလှနခှှငှး
တဦးခငှးမုဒိနှးကငှ့တှာကနေ အုပစွုဖှဲ့မုဒိနှးကငှ့တှာမိုးလို ပုံစံအမိုးမိုးနဲ့ ကှူ းလှနကှှပါတယှ ။
ဒါပမေဲ့ တရားဝငှ အမှုတှဲအဖှဈ တငနွိုငတွဲ့ မုဒိနှးမှုပေါငှး ၉၆ မှုသာ ရှိခဲ့ပါတယှ ။
အမိုးသမီးတှအနနေေဲ့ ရှကလွို့ပှနမွပှောဖှဈတာတှကှေောင့ပှါ ။
( တခှားအကှောငှးအရာတှရှေိပမေဲ့ ဒီနရောမှာရေးဖို့မသင့တှာကှောင့ှ ခနှထွားရဈခဲ့ပါတယှ ။ )
( ဆ ) နအေိမမွှား နှင့ှ ဝတကှောငှးတမွောှားကိုဖကှဆွီးခှငှး
ဆာဘတှှရေဲ့ အတှေးက ကိုဆိုဗိုဒသေ မှာရှိတဲ့အလဘှေးနီးယနှးတှရေဲ့ တညရှှိမှုသကငွှတေ တှကေိုဖကှဆွီးပဈခငှတွာပါ ။
ကိုဆိုဗိုဒသကေ အလဘှေးနီးယနှးအိမယှာ ၂၃၇ , ၈၄၂ အနကကွ အိမယှာ ၄၄ , ၇၆၈ လုံး ဟာ လုံးဝပှားပှားဝပဖွကှဆွီးခံခဲ့ရပါတယှ ။
လုံးဝ ပှားပှားဝပမွသှားတောငှ ပုံစံပကှအှောငဖွကှဆွီးခံရတဲ့ အိမခှှကေ ၄၆ , ၄၁၄ ရှိပါတယှ ။
စာသငကှောငှးပေါငှး ၆၀၀ ကှဖွောကှဆွီးခံခဲ့ရပါတယှ ။
ဆာဘတှှဟော အလဘှေးနီးယနှးရှာတှကေ ရတှငှေးတှကေိုပါ အဆိပခွပတွာမိုးတှေ လုပပွါတယှ ။
နယစွပတှှမှော မှမှေုပမွိုငှးတှထေောငပွီး ထှကပှှေးနတေဲ့အလဘှေးနီးယနှးတှေ ဒုကခွရောကအှောငလွညှး လုပကှှပါတယှ ။ စုစုပေါငှး မှမှေုပမွိုငှးပေါငှး ၅ သောငှးကှောှ ထောငခွဲ့ပါတယှ ။
( ဇ ) မှို့ပှလုယကမွှုမှား
ဆာဘတှှဟော ကှေးလကကွ အလဘှေးနီးယနှးရှာတှကေို အဲ့သလိုဖကှဆွီးပဈသလို မှို့ပှမှာရှိတဲ့ အလဘှေးနီးယနှး အိမတှှေ နဲ့ ဆိုငတှှကေို ဝငရှောကဖွကှဆွီးလုယူတာတှေ လုပကှှပါသေးတယှ ။
ကှေးလကနွဲ့ မတူတာက မှို့ပှမှာ ဆာဘနွဲ့ အလဘှေးနီးယနှးအိမတှှဟော ရောယှကတွညရှှိနတောပါ ။
ဆာဘတှှကေ သူတို့အိမတွံခါးတှမှော ” S ” သကငွှတကေို ရေးထားပီး အလဘှေးနီးယနှးအိမတှှနေဲ့ကှဲပှားအောငလွုပပွါတယှ ။
မှငအှောငပှှောရရငှ ” ၉၆၉ ” တံဆိပကွပသှလိုပေါ့ ။
ပီးရငတှော့ လုယကသှောငှးကနှးဖကှဆွီးမိုးစုံအောငှ ဆာဘတှှကေ လုပကှှပါတော့တယှ ။
ဒီလိုလုပရှာမှာ ဆာဘတွပဖွှဲ့ဝငတှှသောမက သာမနဆွာဘအှရပသှားတှကပေါ ပါဝငကွှူ းလှနကှှတာမို့ ဆာဘတွပတှှေ ဆုတခွှာရခိနမွှာ ဆာဘအှရပသှားတှဟောလညှး ကိုယ့မှနောကိုယှ မလုံပဲ ဆားဘီးယားပှညမွကှီးထဲကို လိုကပွါသှားခဲ့ပါတယှ ။ ဒီလိုနညှးနဲ့ ပှဲစဉလွညှးပီးရော ကိုဆိုဗိုဒသရေဲ့ မှို့ပှတှမှော ဆာဘကွငှးစငသှလိုဖှဈသှားခဲ့တာပါ ။ တရပကွှကတွညှး အတူတူနတေဲ့ မိတဆှှအခငှေးခငှးကို မကှနွှာမထောကပွဲ လုယကတွဲ့ ဆာဘအှရပသှားတှဟော သူတို့နှဈပေါငှးရာခှီနထေိုငခွဲ့တဲ့ ကိုဆိုဗိုဒသကေို သူတို့ဖာသာစှန့ခှှာရတဲ့ အနအထေား ဆိုကရှောကသှှားပါတယှ ။ ဘယသှူမပှု မိမိမှု လို့ပဲ ပှောရမှာပါ ။
( ဈ ) ဖမှးဆီးခှငှးနှင့ှ လူသားဒိုငှးကာလုပခှှငှး
ဆာဘတွပဖွှဲ့တှဟော အလဘှေးနီးယနှးအရပသှားတှကေို ထောငခွှီဖမှးဆီးပီး ဗုံးကှဲခံရနိုငတွဲ့ စကရှုံ အဆောကအှဦတှမှော ခှုပထွားပီး NATO ရဲ့ဗုံးကှဲစဈဆငရှေးကို အခကအှခဲတှေ့အောငလွုပပွါတယှ ။
ဒါပမေဲ့ NATO ဗုံးကှဲလယောဉတှှဟော ဒုတိယကမဘွာစဈတုနှးက လယောဉတှှမဟေုတပွါဘူး ။
စကရှုံကို ရပဆွိုငှးသှားအောငှ လုပရှာမှာ ဒုတိယကမဘွာစဈတုနှးကလို လယောဉအှုပလွိုကကှှီးနဲ့ ဗုံးလာကှဲစရာမလိုပါဘူး ။
F – 15 ဂကှဖွိုကတွာ ၂ စငှးလောကကွ စကရှုံရဲ့ ဂငှနွရတော နဲ့ အဓိက အငဂွငှထွားတဲ့အခနှးတှကေို တခကှလှောကစွီဝငပွဈလိုကရှငှ ပှဲပှတတွာမို့ လူသားဒိုငှးကာ လုပခှှငှးဟာ စဈဆငရှေးလမှးကှောငှးကိုထိခိုကသှညအှထိ မသကရှောကပွါဘူး ။
ဒုတိယကမဘွာစဈအတှငှးတုနှးက ဗုံးတလုံးရဲ့တိကမှှုဟာ တဈ စတုရနှးမိုငှ အတှငှးဖှဈပါတယှ ။ လယောဉပှေါကှ ပဈလိုကတွဲ့ဗုံးဟာ ပဈမှတရှဲ့ ၁ မိုငပွတခွှာလညအှတှငှး ကခှငှတွဲ့နရောကို ကနှိုငတွာမို့ အမှနတွကယပွဈမှတကွို ဖကှဆွီးဖို့ လယောဉအှုပအှမှားကှီးနဲ့ ဗုံးအလုံးရေ ရာခှီသုံးရပါတယှ ။
ကိုဆိုဗိုစဈဆငရှေးအတှငှးသုံးတဲ့ စမတဗွုံးတှကတေော့ အငဂွငှအှခနှး ဂငှနွရတောအခနှးတှရေဲ့ ပှတငှးပေါကတှှကနေေ ဝငခွသှှားပီး အခနှးထဲရောကမွှ ကှကတွိပေါကကွှဲတာပါ ။
ဒီမှာတငှ ဆာဘတှှကေ နောကတွမိုးကှံစညပှှနပွါတယှ ။
ဖမှးထားတဲ့ အလဘှေးနီးယနှးအရပသှားတှကေို ဆာဘတွပဖွှဲ့ယူနီဖောငှးဝတပှေးပီး ဆာဘတွပစွခနှးတှရေဲ့ လူမှငသှူမှငနှရောတှမှော ထိုငခွိုငှးထားတာပါ ။
ဒီမှာတငှ ဗိုလခွှုပကွလခကွ လူတယောကခွငှးစီကို ခှဲခှားသိနိုငပွီး တိုကခွိုကဖွို့ အနီးကပတှေ့ပဈနိုငတွဲ့ ဟယလွီကပွောတာတှေ ထုတသှုံးတော့တာပါပဲ ။
by rightsforburma | Nov 3, 2018 | English, NEWS
The United States has laid emphasis on voluntary return of Rohingyas as Myanmar and Bangladesh have agreed to begin repatriation of Rohingya refugees in mid-November.
“We continue to call for accountability for those that were responsible, and we
would look closely at any plans to ensure that it is in fact voluntary,” Robert Palladino, Deputy Spokesperson at US Department told reporters atapress briefing in Washington, DC.
Source – https://www.thedailystar.net/rohingya-crisis/news/us-voluntary-return-rohingya-refugee-bangladesh-myanmar-1655248
WASHINGTON, DC — Responding to the recent announcement by the governments of Burma and Bangladesh that repatriation efforts for Rohingya Muslim refugees will begin next month, U.S. Commission on International Religious Freedom (USCIRF) Vice Chair Kristina Arriaga, who visited Burma last year, cited evidence of continued atrocities committed by the Buddhist-majority Burma as one of several reasons the announcement is premature. An estimated 921,000 Rohingya refugees currently reside in overcrowded camps in Bangladesh, many of whom fled brutal violence in Burma at the hands of Burma’s military and other nonstate actors.
“Not only have Rohingya Muslims received no assurance of their physical safety when they return to Burma,” said Arriaga, “but there have been no guarantees of protection for their properties, livelihoods or basic human rights, including religious freedom. While we support continued negotiations between the two countries, there is still much to be done before it is safe for these refugees to return to their homeland inamanner that is both dignified and voluntary.”
USCIRF has called on the State Department to redesignate Burma asa“country of particular concern” and to continue to impose targeted sanctions, such as visa bans and asset freezes, on specific abusers in the Burmese military and among nonstate actors.
source – https://www.uscirf.gov/news-room/press-releases-statements/burma-not-safe-returning-rohingyas-warns-uscirf?fbclid=IwAR0aytrgygGvyAfBawkM6S_1aK2ynNBpwxwN6o3hKKM2whXugx_M1ZlvSWc